आज भन्दा दुईहजार पाँचसय बासठ्ठीवर्ष पहिले शान्तिका अग्रदूत सिद्धार्थ गौतम–बुद्धको जन्म भएको थियो । प्राचीन कोलियगणको सीमावर्तीक्षेमा अवस्थित शाक्यगणराज्य अन्तर्गत वर्तमान पश्चिम नेपालको लुम्बिनीमा बैशाख पूर्णिमाकादिन गौतमबुद्धको जन्म भएको हो । संसारले मानेका र स्वीकारेका धेरै प्रमाणिक साक्षयहरु छन् ।एकव्यक्ति सिद्धार्थ गौतमलाई आप्mनो जीवनकालमा देउता झै पुजियो । ।।।राजा,रङ्क फकीर’ सबै उनका सिद्धान्तलाई आत्मसात गरें । संसारिक संस्कृतिलाई मानवतालाई मार्ग प्रसस्त गर्न बुद्धधर्म विश्वधर्मको रुपमा स्थापित भयो । तर मिथिला–मधेसमा बुद्धधर्म स्थापित हुन सकेन ।लुम्बिनी मुलुक भित्र त्यसबेलापनि र हालपनि तराई–मधेसमै छ । बुद्धका नीति सिद्धान्त संसारमा प्रतिपादन भएको छ । उनका धेरै अनुयायीहरु छन् । तर, मिथिला–मधेसमा उनका एकजनापनि अनुयायी वर्तमानमा फेला पर्दैन् । किन र के करण होला ? यो आलेख त्यसैमा केन्द्रित छ ।सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि तत्कालिन समाजमा देखिएका अराजकता, बैयमनुष्यता, अशान्तिलाई अन्तगरी शान्ति कायम गर्न चालेको पाइला संसारभरि लोकप्रिय भयो । संसारले बुद्धकानीति, सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरें । तर, आप्mनै देशको तराईक्षेत्रको मिथिला–मधेसमा बुद्धका सिद्धान्त र बुद्धधर्मको प्रतिपालन भएन । बर्तमानमा अनकौं राष्ट्रमा बुद्धधर्मलाई राजधर्मको रुपमा स्वीकारीएका छन् । त्यहीं मिथिला मधेसमा उदाहरणकालागि पनि बुद्धधर्म मानिने छैन् । बुद्धिष्ट, भिक्षु–भिक्षुणीपनि अपवादको रुपमापनि देखा पर्दैन । जबकी तत्कालिन समयमा बुद्धकै सिद्धान्त मानेर चलेका थिए मिथिला–मधेशपनि । यसको आधार प्रमाणहरु मिथिला मधेशका लोकपरम्पराहरुमा जीवन्त छ । त्यतीबेला नेपाल भारत भन्ने थिएन । भारतवर्ष अन्र्तगत नै कोलिय, शाक्य,लिच्छवी, मग्ध, तिरहुत–मिथिला, विदेह आदि गणराज्यहरु थिए । मिथिला–मधेस वर्तमानमा नेपाल र सीमापारी भारतमापनि पर्दछ । दूबैतिरको इतिहासलाई लोकजीवनको दृष्टीबाट मात्र होइन । बैज्ञानिकताको धरातलमापनि खडो उतार्नु पथ्र्यो र पर्छ । किन मिथिला मधेसमा बुद्धका नीति सिद्धान्त प्रतिस्थापन र प्रतिपादन भएन । त्यस्को बिश्लेषण आउनु पथ्र्यो । त्यो काम धेरै कम भएको छ । सीमापारी र वारी दूबैतर्फका इतिहास रचनेहरु आ–आप्mनो सीधान्तका सीमारेखामा बाँधिएर नै बसें । संसारमा जे जति धर्म–पन्थ, सम्प्रदायीक मार्ग छन् त्योसबै मार्गमा मानव आप्mनो मुक्तिको मार्ग हेर्दा रहेछन् । सुख–शान्ति, ऐश्वर्य हेर्छन् । मानवीय गरिमा तथा व्यक्तित्व, स्वाभिमान एवं अस्मिताको सुनिश्चितता देखछन् । त्यस्तो अवस्थामा कुनै धर्म–पन्थ मानव मूल्यहरुबाट रहित होस त्यो प्रसारित हुन सक्दैन् । नेपालको मिथिला–मधेसमा प्रकृतिको बड़दहस्त सदैव प्राप्त रह्यो । अन्न–धन्नको कमि यस भूखण्डबासीलाई कहिले भएन । त्यसकारण ईश्वरको कमिको अनुभूति समेत समान्यजन गर्न सकेन । तत्कालीन व्यवस्थाका कारण ।।।ढुङ्गा–पाथर’, ।।।रुख–गाछ’, ।।।माटोको टिस्को–माटिक ढेला’लाई पनि भगवान मानेर पुजा गर्ने प्रथा विकसित भयो त्यहीं परम्परा जीवीत रह्यो । मानिसको यस्तो अटुट आस्था बुद्धकै प्राकृत धर्मकै बेसमा बनेका थिए । जो हालसमम कायम छ । बुद्ध पीपलकोबोटमुनी ध्यान गर्थे । उनका आसनीस्थली पीपलबोटलाई जे सुकैभएपनि काटिने र त्यसको काठ उपयोग नगर्ने चलनछ । मात्र पुजा हवन आदि मांगलिक कार्यमा अल्पमात्रामा पीपरका केही हाँकाका काढ प्रयोग गरिन्छ । बौद्धधर्मबाट किन बिमुख भए मिथिला–मधेस वर्तमानमा हाम्रो संस्कार यस्तो भएकोछ मानसिक्ता यस्तो बनिसकेको छ । कुनै कुरो नहुंदा हामि राजनीतिकलाई दोष मान्छौ । राजनीतिक दलका नेतालाई दोष दिन्छौं ; होला पनि ! तर, सूक्षमरुपले हेर्ने हो भने हामि संस्कारगत रुपमा समाज–राष्ट्रमा कोरिएका सीमाभन्दा पृथक जाने, बोल्ने आंट थोरै गर्छौं । शान्ति , समानता, एकता, पहिचान आदि आदर्शका कुरा गर्छौं । किनकी हाम्रा वेद–पुराण, उपनिषद्, मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरु नै त्यस्तै सिद्धान्त सिखाएको हो । हामि त्यस्को ।।।प्mलोअर’ भएका छौं, अनुशरणकर्ता हौं । तर ती ग्रन्थहरुमा नै विभेद, असमानता रहेछ भने त्यसको बारेमा एकशब्द पनि बोल्न चाहदैनौं । नछुटियाई ठ्याक भनि हाल्छौं र उदाहरणपनि दिन्छौ –।।।वेदले यस्तो भनेको छ, उपनिषद्मा त्योकुरा वार्णित छ । धर्मशास्त्रले यसरी ब्याख्या गरेका छन् , त्यो कसरी गल्त हुन सक्छ ! ’ हजारौंवर्ष पहिला लेखिएका ग्रन्थका कुरा ठीक उस्तै कुनैदलका नेताले भनेका कुरा उनका समर्थक र अनुयायीहरुले गरेका ब्याख्या झै हुन्छ । सुधारको खांचो यहा नीरपनि छ । बौद्धधर्म विश्वमा फैलिएको हो त्यो मात्र आप्mनो विशेषताका कारण । किनत आजपनि मानव मूल्यमा आधारित छ बौद्धधर्म । सनातन धर्म बस्तुतः ब्राह्मण धर्म हो । जुनधर्मलाई हिन्दुधर्मको चादरले ढाकेर प्रसारित गर्ने काम हुंदै आएको छ । यो ।।।धर्म मुक्तिको सहज मार्ग हो ’ भनिन्छ । यो सिद्धान्त एउटा अपवाद मात्र हुन् । धूर्त–चतुर चालाख आर्य–ब्राह्मण आप्mनो मतलाई स्थापित गर्न नीकै प्रचारक रुपमा काम गर्दै आए । प्रचारकै बूतामा धर्मका ।।।टलहा’ टक्सार चलाउंदै रह्यो । त्यसमाथि उनिहरुको जीवन निहित रह्यो । तर, बुद्धको सार्वजननी एवं सार्वकालिक धर्म थियो तर बुद्ध धर्मका प्रचारक थिएन, भएनपनि । सनातनधर्म अन्तर्गत एउटा संस्कृति भूmठ,लुट र भोग,लिप्साको रहंदै आएको हो । अर्को सत्य, न्याय, सदाचारको ! यी दूबैबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्थापनमा आ आप्mनो बर्चश्व स्थापित गर्ने गराउने खेल भई रहंदा बुद्धका सिद्धान्तलाई जीवनमा सर्वस्वीकार्य गर्न दिइएन । गौतम बुद्ध आफैमा एउटा इतिहास हुन् । उनका उपदेशहरु अनुपम छन् । त्यसैले बुद्धधर्म विश्वधर्म भएको हो भनि भन्नु पर्दा कुनै अतिसश्योक्ती नहोला । बुद्धका उपदेश, सिद्धान्त प्रतिपादित होस भन्ने पक्षमा मिथिलाका पण्डा, पुरोहितहरुले समान्यजनलाई ध्यान केन्द्रित हुनै दिएन । त्यसका पछाडि अरुकेही नभएर मूलकारण –।।। धर्मको नाममा पाखण्डपना, र त्यसको माध्मबाट धन आर्जनको बाटो उनिहरुले बनाए ! ’ धर्मको नाममा आडम्बर अधिक भयो र पाखण्डपनाले धन आर्जनको माध्यम धर्मलाई उनिहरुले बनाए । धर्मको नाममा ईश्वरको नाममा भजाई रजाईगरी रोजी रोटीको साधन बनायो । त्यो साधन बन्द नहोस भनि चिन्ताले पण्डा–पुरोहितहरु सही चिन्तन गर्न बाट रोकि राखें । र बौद्धको धम्मबाट उत्पति भएको धर्मलाई सर्वसाधारनबीच परिचित हुन दिएन र स्थापित पनि हुन दिइएन । आर्य विचारधाराको घुसपैठ बिस्तारै बिस्तारै जसरी बढ़दै गए । त्यही तिव्रताका साथ बौद्ध उपासकहरु क्षीन्न हुंदै गए । आर्य–ब्राह्मणवादी सोंच चिन्तन लोकमानसमा जसरी स्थापित हुंदै गए । त्यसैगरी बौद्धधर्म मान्नेहरु मिथिला–मधेसबाट सिद्धिन थाले । जो देश समाज बुद्धका नीति सिद्धान्तलाई गम्भिरतासाथ लिए । जाने–बुझे, जीवनमा अपनाए, त्यो देश–समाज खुशहाल र समृद्ध छन् । चीन, जापान, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, म्यानमार, भुटान, श्रीलंका, लाओस, कम्बोडिया, तिब्बत, ब्रिटेन, आदि देश यसका उदाहरण हुन । बुद्धधर्म नअपनाएका देशहरु आर्थिक रुपमा सम्मपन्न भएपनि अस्थिरता र अराजकतामा सदैब पिरोलिएकै रहन्छ । यो कुरा संसारमा नजर फर्काएर हेर्दा सहज रुपमा बोध गर्न सकिन्छ । नेपाल र भारतमा जो समुदाय बुद्धधर्ममा विश्वास राखेक छन् सो अनुकूलको आचारण बनाएका छन् उनीहरुको जीवनपनि खुशहाल नै छ । सम्राट हर्षवर्धन पछि बौद्धमार्गीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न लायकका कोही शासक भएन । बुद्धिष्टहरु आपूmलाई असुरक्षित अनुभूति गर्न थाले । र, ।।।निशोधाह’ भए । ब्राह्मणी आडम्बरी व्यवस्था एवं रक्तपातपूर्ण अवस्थामा सत्ता कायम गर्ने र शासनशैली आप्mनो हातमा राख्ने प्रवृति निकै थियो । त्योशासकीय प्रबृतिकै कारण बौद्धभिक्षहरुलाई देशको मिथिला–मधेसबाट तत्कालिन समयमा पलायन हुनु परेको थियो । यो नेपालको मिथिला–मधेसक्षेत्रको कुरा मात्रै होइन । भारत जस्ता महादेशमापनि ब्राह्मणहरुको आतंकबाट आहत भएर पलायन गर्न बौद्धमार्गीहरु बाध्य भए । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएकोछ । मधेशी–पहाडी–शेर्पाली–थारु–तामाङ्ग आदि वर्णमा हामि विभक्त भएका छौं । तर, समग्रमा हामि नेपाली हौं ! हाम्रो पूर्णता यसैमा छ । यो भावनाको विकास हामिले बौद्धका नीति सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दा सहज भावले हुन्छ । मिथिलाको इतिहास,सभ्यता तथा संस्कृति संसारका प्राचीनतम्, उच्चतम् एवं सार्वाधिक समृद्ध सभ्यता र संकृति मध्ये प्रमुख मानिन्छ । यसको धेरै सारो साक्षय विद्यमान छन् । सम्पूर्ण आर्यावर्तीय संस्कृतिको तत्ववोध मात्र मिथिलाको लोक–संस्कृतिलाई ज्ञान आर्जण गरेपछि हुन्छ । यस्तो बिराट मैथिली संस्कृति हो । तर, अन्धआस्था, वर्तमान समयमापनि बैज्ञानिक दृष्टकोणले सही नभएपनि लोकविश्वास बनेकाले बुद्धधर्म फलित मिथिला मधेसी समाजमा हुन नसकेको हो, एउटा सत्यपक्ष योपनि हो । उपनिषद्कालमा मिथिला शिक्षा र संस्कृतिको प्रमुख केन्द्र थियो । कुरु, पञ्चाल, आदि स्थानबाट आर्यब्राह्मणहरुले दार्शनिक विवेचनामा सामेल हुन आउंथिए । मिथिला नरेश जनक स्वयं तत्वाज्ञानी थिए । याज्ञवल्क्य जनकका विद्वद्सभाका प्रसिद्ध दार्शनिक थिए । मिथिलाका शिक्षा पद्धतिको परिणाम यस्तो ।।। छओटा भारतीय दर्शन मध्ये ४ ओटाको रचना नेपालको यसै मिथिला भूमिमा भएको मानिन्छ । सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांशा यी चारओटा दर्शन शास्त्रको रचना परम पवित्र भूमि मिथिला– मधेसमा भएको हो । ईशापूर्व ६००–१०० वर्ष पूर्वको कालखण्डमा गौतम ऋषि–।।।न्याय’, कणादऋषि–।।।मीमांशा’, जैमिनी–।।।बैशेषिक’ तथा कपिलमुनीले असख्य ।।।दर्शन’ (दर्शनशास्त्र) प्रतिपादन मिथिला भूमिमा बसेर गर्नु भयो । ।।।।।। वौद्धधर्मको प्रभावको आगाडि वैदिकधर्म वा ब्राह्मनीधर्म प्रायः लोप हुन थालेको थियो । मिथिला–मधेसमा सामाजिक संरचना भग्न हुन सकेन तर सुसुप्तावस्थामा अवश्य रह्यो । अजात शत्रुका आक्रमणले मिथिला परतन्त्र बन्यो । मगध, गुप्त आदि बंशको अधिन रहंदै आप्mनो अस्तित्व जोगाएर बाँचे । पुनः हर्षवद्र्धन अधिन मिथिला आयो । सातम् शताब्दिको अरुणाश्व कालामा मिथिलामाथि तिब्बती आक्रमण भयो । आठम् शताब्दिको अन्तिमचरणमा बङ्गालका पालबंशले मिथिला माथि आधिपत्य कायम गर्यो । हुंदाहुंदै सन् १०९७ ईस्वीमा कर्णाटवंशीय सम्राट नान्यदेव मिथिलामा सवलराज्य स्थापना गर्नमा सफल्ता पाए । त्यसपछि ब्राह्मणधर्म एवं संस्कृतिको अनुशासन समाजमा पुनःस्थापित भयो । वैदिकधर्म जागृत भए र बौद्धधर्मको प्रभावहरु त्यसपछि क्रमशः कम हुँदै मिथिला–मधेसमा समाप्त भएर गयो । अर्को शासन सत्तामा जो बर्ग समुदायको पकर–पहुँच हुंदैन त्यो बर्ग–समुदाय देशका मूलधारबाट कटेकै हुन्छ । त्यस्ता वर्ग आप्mनो जीविकाका साधन जे जसरी हुन्छ निर्वाह गर्न चाहन्छन् अरु सित सरोकार राख्दैन् । यस प्रकारले वैदिककालदेखी बुद्धकालसम्म मिथिला–मधेस आर्य सभ्यताको केन्द्र मात्रे नभई विश्वसभ्यताक केन्द्र बन्यो । लोकतन्त्रको नाँया बाटो देखाइयो तर स्वयं पछिरह्न गयो । यसका पछाडिका कारणमा ब्राह्मणवादी सोंच चिन्तनले मिथिलारुपि रुखलाई घमिरा बने झै च्यातेर खायी दियो । क्रमशः बुधवारको अंकमा प्रकासित हुनेछ ।